टुनिशिया, Monastir। रिसोर्ट होटल
टुनिशिया, Monastir ... क्षेत्रमा होटल को 90 को दशक मा यसको heyday को apogee अनुभव। आखिर, एक रिसोर्टमा शहर अब shamefully बहिष्कार पूर्व अध्यक्ष को जन्म ठाउ थियो। र अन्तिम आफ्नो सानो मातृभूमि लागि कुनै खर्च बचाउनुभयो। राम्रो सडक, greenery धेरै, सबै सफा र साफ - त्यसैले Monastir रूपमा पर्यटकहरु विभिन्न देशका, रूस लगायतका देखियो। यदि सुरुमा होटल मुख्य रूप शहर मा, मध्ययुगीन ठाँउहरु नजिकै अब केन्द्र को उत्तर गर्न Skanes को एक विशाल रिसोर्ट क्षेत्र स्थित छ फैलियो। यो टुनिशिया, Monastir आउन जो सबै भन्दा पर्यटकहरु खोज्ने। यसलाई स्वस्थ स्थानीय thalassotherapy प्राप्त गर्न सस्तो बनाउन र, पाठ्यक्रम, लोकप्रिय स्थानीय बजेट हलिडे, साथै मानिसहरूलाई मा होटल, tusovka युवा छन्। Skanes त हाल को वर्ष मा हुर्केका, कि साउसे को लगभग सरहद विमानस्थलमा गर्न खुट्टा यात्रा मा दस मिनेट पुग्छ, र आफ्नो होटल केही। त्यसैले, पर्यटक टाढा स्थानान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ नगर्ने, यो क्षेत्र को धेरै रुचाउनु छन्।
टुनिशिया, Monastir। को "स्तर तालिका" मा होटल
"Treshek" - अवलोकन होटल बजेट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यी होटल मुख्य रूप शहर मा अवस्थित छ। तिनीहरूले आधारभूत सेवा र सुविधा प्रदान। साथै, तिनीहरूलाई को समुद्र - सडक मार्फत, र थप। तर तपाईं विदेशी प्राच्य जीवन महसुस र आकर्षण प्रशस्त आनन्द उठाउन सक्छौं। र Bourguiba र महान् मस्जिद र अन्य स्मारक को समाधि - यिनी होटल टाढा छैन। साथै, धेरै नजिक यो यटों लागि पोर्ट छ, र यो गर्न अर्को Seafront मा - सबै भन्दा राम्रो माछा रेस्टुरेन्ट। त्यहाँ सस्तो र खान धेरै राम्रो हुन सक्छ, र तस्वीर लिन - मेरिना (बन्दरगाह) अत्यन्तै सुरम्य र टुनिशिया भर ज्ञात छ।
हामी यहाँ वर्णन जो Monastir होटल, यसको सफलता धेरै हदसम्म यो "Quartet" गर्न बाध्य। तिनीहरूलाई लगभग सबै Skanes छन् र समुद्र तट मा सही स्थित। यहाँ, व्यापक बलौटे समुद्री तट, तपाईं अन्य टूरिस्ट टाढा आफ्नो lounger राख्नु र एकान्त मा Indulge गर्न सक्नुहुन्छ। खैर, यो रिसोर्ट क्षेत्र साउसे तिनीहरूलाई ड्राइव छ कुनै नाइटक्लब वा अन्य मनोरञ्जन, जस्तै मोजमस्ती त भोक घमण्ड गर्न सक्दैन। होटल को अधिकांश "शाही मिरामार," "Thalassa Monastir" र "गाउँ Skanes सुझाव दिन्छौं।" तर त्यहाँ "चार" बीचमा सही हो। त्यहाँ पनि स्थान र सेवा दुवै धेरै राम्रो छ "फाइभ्स" को एक नम्बर हो, तर लगभग रूपमा उदाहरणका लागि अन्य क्षेत्रहरु, Hammamet मा जस्तै शानदार छैन। आधारहीन, तिनीहरूलाई दुई उदाहरण यो रिसोर्ट होटल को सुविधा विचार फरक स्थानहरूमा हुन छैन।
टुनिशिया, Monastir। "डल्फिन" होटल
यो केन्द्रीय "चार" सडक मार्फत समुद्र तट छ। अतिथिहरूको ऐतिहासिक स्मारक र रेस्टुरेन्ट गर्न निकटता, साथै प्रसिद्ध विचरण र पोर्ट फाइदा लिन सक्छ। होटल ठूलो क्षेत्र: यहाँ पाँच स्विमिंग पूल लागि, प्रणाली मा स्पा उपचार र भोजन को लागि एक केन्द्र "सबै समावेशी" (हुनत यो नाश्ता वा आधा बोर्ड संग सम्भव आवास छ)। होटल मात्र होइन एनिमेसन तर पनि यसको आफ्नै नाइट क्लब, त्यहाँ छ।
टुनिशिया, Monastir। "बेला Vista" होटल
यो "चार" Skanes मा स्थित छ, र एक सुन्दर पाम निकुन्ज द्वारा घेरिएको छ। यसलाई मा निर्माण गरिएको छ को Moorish शैली, समुद्र तट मा सिधै छ। यो सत्य विमानस्थलमा मात्र किलोमिटर छ छुट्याउँछ। इलाका विशाल छ - 80 हेक्टरमा र होटल एक भन्दा बढी हजार अतिथि लाग्न सक्छ। कोठा प्रकार मानक कोठा सुइट्स दायरा। अतिथिहरूको एक "सबै समावेशी" मा खुवाइन्छ। यी सेवाहरू, मुख्य रेस्टुरेन्ट "कार्निभल" बाहेक, नाश्ता संग इटालियन र समुद्री "एक ला कार्टे" साथै धेरै बारहरू: वाफल्स, Pies, सलाद, बर्गर। लबी वाइफाइ काम गरिरहेको छ र एनिमेशन कार्यक्रम साँझ सम्म बिहान देखि जारी छ।
Santorini, ग्रीस मा सस्ता होटल
Regnum Carya गोल्फ र स्पा रिजोर्ट, टर्की, BELEK: यात्री समीक्षा
Neelams भएको Glitz4* (भारत, उत्तर गोवा): होटल दर्जा, समीक्षा
शाही Alhambra Palace 5: * वर्णन, यात्री समीक्षा
बोरिस Paikin निर्वाचित Leningrad क्षेत्र को फुटबल संघ को अध्यक्ष भएको थियो
Gaudí हल - सबै विवरण
माइक्रोसफ्ट Silverlight: यो कार्यक्रम के हो?
मिश्र को फिरऊनको सैन्य अभियान
रियो डी जनेरियो मेला
रिसोर्टमा Polyana: कहाँ भ्रमण मा जाने
Eyebrows कसरी बांधन गर्न?
Eclecticism - असाधारण मान्छे को एक शैली